तुलसीको सेवनले दिलाउँछ फ्लू र भाइरसबाट छुट्कारा ! यसरी प्रयोग गर्नुहोस् ।(बिधि सहित) – yuwa Awaj
कार्तिक २४, २०७७ सोमबार 7
काठमाडौ : तुलसीको पात प्राकृतिक रूपमा राम्रो एन्टिबायोटिक हुने गर्दछ। यो प्राय: सबै प्रकारको भाइरस र फ्लूका लागि एक घरेलू उपचार हो। चिसो र ज्वरो आएको खण्डमा, औषधिको रुपमा यसको प्रयोग गरिन्छ।
आयुर्वेदमा यसको दैनिक सेवनको बारेमा कैयौं फाइदाहरू बताइएको छ। खाली पेटमा तुलसी खानु, स्वास्थ्यको हिसाबले निकै लाभदायक सावित हुदछ। आज हामी तुलसीको पात सेवन गर्ने ७ तरिकाको बारेमा चर्चा गर्नेछौ। जसले मौसमी ज्वरो र फ्लूबाट जोगाउन मदत गर्दछ।
तुलसीको पात चपाएर खानुहोस् ।
ताजा तुलसीको पातमा ‘एडाप्टोजेन’ वा ‘एन्टी-स्ट्रेस एजेन्ट’ पाइन्छ। जसले, यो प्रमाणित गर्दछ कि दैनिक १०-१२ तुलसीको पातहरू चबाएर खाएमा रक्तचाप नियन्त्रणमा रहनुका साथै तनावबाट पनि मुक्ति मिल्दछ। यसले रगत शुद्ध पार्नमा पनि निकै मदत पु¥र्याउदछ।
तुलसी र ज्वानोको झोल
यस हर्बल रस बनाउनका लागि ताजा तुलसीको पात, ज्वानो, जीरा, आँपको पाउडर, नुन र पुदिनाको पातहरूको आवश्यक हुन्छ। यी सबै सामग्रीहरुलाई एक भाडामा राखी, ठिक मात्रामा पानी मिसाएर, १० देखि १५ मिनेटको लागी उमाल्नु पर्दछ। यसको सेवनले ‘डिहाईड्रेसन’ को समस्या भएका व्यक्तिहरुका लागि निकै लाभदायक साबित हुनेछ।
तुलसीको पात, अदुवा, मरिच, दालचिनी र अलैंचीको मिश्रणलाई उमाल्नुहोस्। विज्ञहरूका अनुसार, प्रत्येक दिन एक कपको तुलसीको पानी पिउँदा, डेंगु र मलेरिया जस्ता ज्वरोबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
तुलसी, मह र बेसार
यस मिश्रणले रगत प्रवाह उत्तेजित गरेर पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउदछ। यसको ‘एन्टी-इन्फ्लेमेटरी’ र ‘एन्टी-फंगल’ गुणहरूले खोकी र चिसोबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ।
तुलसी मिसाएको चिया
तुलसीको पात, चिनी, कागती र पानीले बनेको चिया, स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। यो ‘क्याफिन’-मुक्त चियाको स्वाद मीठो हुनेगर्दछ। यो पाचन प्रणालीको लागी निकै फाइदाजनक हुँदछ। यसमा हुने ‘एन्टि-ब्याक्टेरियल’ गुणहरूले मानिसलाई मौसमी ज्वरो र फ्लूबाट पनि बचाउँछ।
तुलसी र चन्दन
तुलसीको ताजा पातहरू र चन्दनको पाउडर मिलाएर, पेस्ट बनाई निधारमा लगाउनुहोस्। यो पेस्टले टाउको दुखेको बेलामा राहत दिलाउनुका साथै, गर्मीको समयमा शीतलता पनि प्रदान गर्दछ।
ताजा तुलसीको जुस
ताजा तुलसीको रस आँखा रोगका लागी एक जादुई उपाय हो। विशेष गरी ती व्यक्तिहरुका लागि, जसलाई आँखा पोल्ने तथा रातको अन्धोपनको समस्या छन्। यो समस्या सामान्यतया ‘भिटामिन ए’को कमीको कारणले हुने गर्दछ। यी समस्याहरूबाट बच्न, रातको समयमा आँखामा तुलसीको रस राख्न सल्लाह दिइन्छ।
Prevओलीलाई भोलिसम्मको अल्टिमेटम दिएका छौं – नेता खनाल !
Nextधनिया स्वादका लागि मात्र होइन यी रोगको औषधि पनि हो…हेर्नुहोस् ।